TAO MANJAKADORIA – Blaogin'i Voniary
Rev. Maurice RASAMUEL
TRANO PRINTY FJKM Imarivolanitra
“Raha varatra hilatsaka ianareo izahay vatolampy ampy andihizanareo; raha havandra hiraraka ianareo izahay tanetibe amy hielezana; raha rambon-danitra hipaoka izahay eto vatobe tsy azo hontsonina; raha rano hanafotra izahay eto fefiloha tsy azo ihoarana; raha fahavalo handrava izahay eto mànda vy tsy azo ihoarana. Ka ataovy izay fareherinareo tompokolahy” P. 41
Famintinana: RAMIAKATRARIVO sy RAMAROVOLANA dia mpanjaka nifanila tany. Ity voalohany dia lehilahy nasondrotry ny sainy sy ny fahaizany teo amin’ny seza fiandrianan’ny fanjakan’i Manjakadoria. Ny an’ity faharoa kosa dia efa nifandovan’ny razany hatry ny ela ny fanjakan’i Tsiazompaniry. Naniry haka vady an-dRazazarivola zanaka vavitokan-Ramarovolana Ratovonarivo zana-dRamiakatrarivo. Rehefa nifandinika ny olon-dehibe taty amin-drazazalahy dia tapaka fa ny mpanjaka omban’ny jeneraly Ratsialainkery miaraka amin’ny miaramila vitsivitsy no ho andeha hangata-bady.
Nony teny an-dàlana, nivonona amin’izay rehetra hitranga izy ireo noho ny nofy ratsy toa fambara, nanjo ny mpanjaka sy ny komandy. Rahefa tonga nanoloana an-dRamarovolana àry izy ireo dia niroso tamin’ny fangataham-bady. Loza anefa no nafitsok’ity mpanjaka ratsy fanahy fa narabiany sady nasainy nosamborina ireto vahiny. Efa niomana ny ankilany ka vetivety foana dia nivadika ny rasa ka Ilay nikasa hambabo indray no babon’ny sasany.
Nandositra izy ireo ka sedra maro no natrehany tamin’izany. Nisy fotoana aza moa, tao anatin’ny indray mipy maso dia noteren-doza telo ireto mpandositra: ny rano, ny mamba ary ny mpanenjika. Avotra soa aman-tsara ihany anefa izy ireo noho ny fitondran’Andriamanitra. Rehefa nialokaloka tao Kelimafana, vohitra nisy an-dRatovahoaka indray izy ireo dia latsaka am-bilany jobo rehefa nohodidinin’ny mpanenjika. Tafiditra tao an-tanàna ny fahavalo, ary efa saika may aman-trano tao ny vahoaka iray vohitra. Fa mbola tamin’ny fomba mahagaga no nahitan’izy ireo làlana miafina mankany anaty zohy. Tao anatin’ny tahotra, fitaintainana sy fahadisoam-panantenana iny mihitsy ireto mpandositra no tonga namonjy azy ny tafika avy any Manjakadoria. Rehefa vita ny fanarenana ny simba tao an-tànana dia nitodi-doha nakany Manjakadoria ny mpanjaka sy ny tafiny ary ny babo.
Rehefa mby tany dia nanomana tetikady hamonjena an-dRamarovolana ny miaramilany vitsivitsy. Trà-tehaka anefa ilay iraka nisandoka ho mpivaro-mofo niditra tao anatirova. Nony alina, niroso ihany ireto andian’olona efa vonona ka nandoro ny lapan-dRamiakatrarivo. Tao anaty ady mangotraka no nanavotany ny mpanjakany sy nandosirany. Tsy lasa lavitra akory anefa izy ireo dia voasakana ka tsy maintsy nandia tany naleha tahaka ny fanoron-dratsy.
Betsaka ireo maty havana no nikasa hamaly faty saingy ny fitsaran’ny mpanjaka ambony indrindra. Nampanantsoina nankany Manjakadoria àry ny vady aman-jana-dRamarovolana sy ny praminisitra. Tsy nampoizin’ny besinimaro anefa ny fihetsi-dRamiakatrarivo tamin’ireo olomeloka. Ramarovolana izay efa nieritreritra ny tsy ho velon’aina intsony dia nasandrany tamin’ny voninahiny maha-mpanjaka azy. Fihavanana no nosantarin’ny fanjakana roa tonta nanomboka hatreo. Fifamatorana izay tsy ho rava mandrakizay satria namafisin’ny fanambadian-dRATOVONARIVO sy RAZAZARIVOLA.
“Eo an-tànako ny ainareo, ary azoko atao ny manameloka sy mamono ny ainareo ho faty; ary azoko atao koa ny maka ny fnjakana. Kanefa tsy hanao izany aho…” P 113
faha-mpanjaka, fangataham-bady, maha-malagasy, maurice rasamuel, ramiakatrarivo, tantara foronina, tao manjakadoria
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, HARRY POTTER, HUNGER GAMES, STAR WARS, TWILIGHT
IRENY PITSOPITSONY IRENY NO MAHAMAMY NY FIAINANA